10 Amaphutha Wokuhamba Okufanele Uwagwebe EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Amaphutha Wokuhamba Okufanele Uwagwebe EYurophu
Isikhathi sokufunda: 7 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 13/11/2020)
Uma uhlela uhambo lwakho lokuqala oluya eYurophu, kunezinto ezimbalwa odinga ukuzazi mayelana nokuningi lamadolobha amahle emhlabeni. sidizayine umhlahlandlela ophelele we 10 amaphutha wokuhamba okufanele uwagweme eYurophu. Uhambo oluya ezweni lezinqaba, izindlela zokupheka ezinhle, amapaki esizwe, futhi amadolobhana amahle, kungaba ngolunye lwamaholide angalibaleki ozoba nawo. Ngokuphambene nalokho, ingabuye iphenduke inganekwane embi futhi ibe nesiphetho esibi, uma ungakakulungeli kahle.
Noma ngabe uya eYurophu okokuqala noma uyabuya, lezi zeluleko zizokwenza uhambo lwakho luphephe kakhulu, ukhululekile kakhulu, futhi impela amaqhawe.
1. Hhayi Ukuvakashela Amadolobha Amancane Nezindawo Ezingasashayelwa-Ukulandelwa
Uma kuwuhambo lwakho lokuqala oluya eYurophu, lapho-ke ubheke ezindaweni wonke umuntu akhuluma ngazo. Nokho, uma ufuna ukuthola i-Europe ekhethekile, then not visiting small villages and known cities are one of the travel mistakes to avoid in Europe. You should plan your trip to the most unforgettable off the beaten path places in Europe.
Kunjalo, uma ufuna ukubona futhi unezithombe ezifanayo nezinye izigidi zezivakashi ezigcwele emigwaqweni yaseParis, Milan, nasePrague, bese ulandela izixuku. kodwa, uma unomphefumulo wamazwe, futhi ngifuna lawo magugu afihliwe, ke hlela uhambo lwakho nxazonke amadolobhana amancane futhi ayingqayizivele eYurophu.
2. Amaphutha Wokuhamba Okufanele Uwagwebe EYurophu: Ukungasebenzisi Izithuthi Zomphakathi
Enye yezinto zokuqala eza engqondweni uma uzwa izinto zokuthutha umphakathi, kuminyene futhi kushisa amabhasi, olayini, nethrafikhi. Nokho, ezokuthutha zomphakathi eYurophu akusizo nje amabhasi kuphela kodwa nezitimela nezitimela. Ezinye izivakashi zingancamela ukuqasha imoto, bese uhamba, kepha izinto zokuhamba zomphakathi eYurophu zikhululekile kakhulu, ukugcina isikhathi, ezishibhile, futhi kunconyiwe.
Ungafinyelela kalula ezingxenyeni ezikude kakhulu zaseYurophu, izindawo zemvelo ezimangalisayo, izinqaba, futhi ukubukwa obumangalisayo, ngesitimela. Ayikho indlela engcono yokuhamba uzungeze iYurophu kunesitimela, yisikhathi esiphelele kanye nokonga imali.
3. Ukungatholi Umshuwalense Wezokuvakasha
Yebo, amadolobha aseYurophu ngomunye wemizi esethuthuke kakhulu nephephe kunazo zonke emhlabeni. kodwa, usengumuntu, futhi amawa eziqiwini zikazwelonke zaseYurophu amade kakhulu futhi angenasihe. Ngenkathi ungaba ngumhambi nomhambi onolwazi kakhulu, usengabanjwa umkhuhlane, ukusonta iqakala, noma yebiwe ikhamera yakho.
Umshuwalense wokuhamba eYurophu ubalulekile empilweni nakwezinye izizathu zokuhamba. Ukuthola umshuwalense wokuhamba eYurophu kufanele, futhi akufanele wonge ngesidingo esinjalo. Ukungawutholi umshuwalense wokuhamba kuyiphutha okufanele uligweme lapho uya eYurophu ngoba kungakubiza imali encane.
4. Amaphutha Wokuhamba Okufanele Uwagwebe EYurophu: Hhayi Ukuthenga Amathikithi Kusengaphambili
IYurophu iyabiza. Noma ngabe uhambela izindawo ezingabizi kakhulu, iminyuziyamu namathikithi okuheha azokubiza imali encane. Ukungawathengi amathikithi ngaphambi kwesikhathi kungenye yeziphambeko ezinkulu okufanele uzigweme e-Europe, izigidi zezivakashi ezivakashela iYurophu minyaka yonke, kuzokuqinisekisa ukuthi.
Ngakho, ungathola amadili amahle wezindawo ezivelele zaseYurophu, ezikhangayo, nemisebenzi, uma ucwaninga futhi ubhuka kusengaphambili. Kwesinye isikhathi ungathola amadili amahle kakhulu ngokumane ukuthenga amathikithi online, futhi ikongela isikhathi esibaluleke kakhulu ohambweni lwakho. Ngaphezu kwalokho, uma kuwuhambo lwakho lokuqala oluya eYurophu, kufanele uyilungele imigqa emide. Ngakho, ukuthenga amathikithi okuvakasha nawokuheha ku-inthanethi kuzokusindisa ekumeni emvuleni enethayo, izinsuku ezishisayo zasehlobo, futhi ikushiyele isikhathi salokho umbono nepikinikini.
5. Ukushintshana Kwemali Esikhumulweni Sezindiza
Ukuhambela kwelinye izwe kungaba yingcindezi, ukungakhulumi ulimi noma ukuthola indlela yakho edolobheni. Ukusingatha isabelomali sakho kanye nemali yakwamanye amazwe nakho kungacindezela. Ngenkathi ukushintshana ngemali esikhumulweni sezindiza kunethezekile futhi kunokwethenjelwa, kungenye yeziphambeko zokuhamba okufanele uzigweme eYurophu.
Imali oyikhokhayo khokha futhi ushintshe imali kuzokubiza, ngakho-ke kungcono ukwenza ucwaningo lwakho online ku-eamaphuzu we-xchange. Futhi, ungahlala ubuza ekwamukelweni kwehhotela lakho, bazokujabulela ukuncoma amaphuzu emali athembekile endaweni. Kunconywa ukushintshana ngokwanele ngohambo olusuka esikhumulweni sezindiza, nemali ezohlanganisa eyokuqala 1-2 izinsuku ohambweni lwakho.
6. Ukubhuka Indawo yokuhlala Emakhelwane Ongalungile
Indawo ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu ekwakheni iholide ephelele e-Europe. Ungenzi ucwaningo lwakho engxenyeni ehamba phambili yedolobha, omakhelwane, noma isigodi sokuhlala, kuyiphutha okufanele uligweme lapho uhamba eYurophu. Ukukhetha indawo yokuhlala kwakho kubaluleke njengokukhetha uhlobo lwendawo yokuhlala. Ukuhlala engxenyeni engafanele yedolobha kungakubiza ngesikhathi sokuhamba, traffic, intengo, nokuphepha.
7. Amaphutha Wokuhamba Okufanele Uwagwebe EYurophu: Ukudla Endaweni Yokudlela Yokuqala Oyibonayo
Uma ungumvakashi ojwayelekile, khona-ke uzoya emaketangeni okudla okusheshayo athandwayo ngesidlo sasemini noma indawo yokudlela yokuqala osendleleni. Nokho, ungahle uphuthelwe izindawo zokudlela ezinhle, ngezitsha zasendaweni ezinhle kakhulu nemibono yokubuka ezokhipha umoya wakho.
Uma uchitha isikhathi esithile ucwaninga ngaphambi kohambo lwakho, uzoziphatha kokuhlangenwe nakho okungenakulibaleka kwezokupheka. Ngaphandle, ukuze ukuzama ukudla okumnandi, ungonga ama-dimes ambalwa, esikhundleni sokuqhuma endaweni yokudlela yokuqala ezungeze. Ikhofi elimnandi, khekhe, ukudla kwasendaweni, nezitsha ezihlaba umxhwele ngamanani ahlekisayo, kungaba khona ekhoneni.
8. Ukunamathela Ku-Guidebook Kunokuba Uhambo Lwamahhala Lokuhamba Ngedolobha
Incwadi yokuqondisa iwumthombo omuhle wokhuthazo lohambo oluya eYurophu, nokuba nohlelo lokuhamba olujwayelekile. Nokho, ukunamathela encwadini yakho yokuqondisa kungenye yeziphambeko ezinkulu kakhulu zokuhamba ongazigwema eYurophu. Kusho ukuthi uzovakashela izindawo ezifanayo nezigidi zabanye abavakashi, futhi njengomvakashi.
Ukuthola idolobha ku- uhambo lokuhamba mahhala kuyindlela engcono ukujabulela amadolobha amahle kakhulu eYurophu. Umhlahlandlela wesiNgisi okhuluma endaweni uzokuhambisa edolobheni. Ngaphezu kokukhombisa amasayithi adumile futhi adumile, Umhlahlandlela wokuhamba wedolobha uzokutshela izimfihlo ezigcinwe kahle zedolobha futhi akunikeze izincomo eziningi nezeluleko zedolobha. Lokhu kuhlanganisa izincomo zokudla, amadili amahle, izindawo ezifihliwe, futhi okubaluleke kakhulu ukuthi ungahlala kanjani uphephile.
9. Amaphutha Wokuhamba Okufanele Uwagwebe EYurophu: Hhayi Ukupakisha IYurophu
Libalele, liyana, kubanda, noma umswakama, enye yezinto ezikhetheke kakhulu ngeYurophu ukuthi ungathola konke 4 izinkathi ngosuku. Ngakho, ukungapakiseli ngqo isimo sezulu saseYurophu kuyiphutha lokuhamba ukugwema ngazo zonke izindleko.
Izikibha, ibhantshi lemvula nomoya, izicathulo ezintofontofo zimane nje zibalulekile ukupakisha uhambo lwakho oluya eYurophu. Kungcono ukupakisha nokugqoka izendlalelo, ngale ndlela uzobe ukhululekile kunoma yisiphi isimo sezulu, futhi ngeke ngiphathe ikhabethe lonke.
10. Ukugcina Imali Yakho Endaweni Eyodwa
Amadolobha aseYurophu aziwa ngokumangalisa, kepha futhi nge ukukhiya, izicupho zabavakashi, nezinhlelo ezahlukahlukene zokukhohlisa izivakashi. Diving isabelomali sakho sokuhamba phakathi uhambo lwakho losuku isikhwama, ephephile, futhi ikhadi lesikweletu liyindlela engcono kakhulu yokuhamba ngokuphepha futhi ujabulele.
Kungcono ukuhlala ohlangothini oluphephile futhi ugweme ukugcina imali yakho nekhadi lesikweletu endaweni eyodwa. Ngakho, ukuba nezinto zakho eziyigugu kuwe ngaso sonke isikhathi nasezindaweni, kuyiphutha lokuhamba okufanele uligweme eYurophu.
ukuze uphethe, kunezindawo eziningi ezinhle ongazithola eYurophu. Ungachitha impelasonto emangalisayo noma uhlele uhambo olude lwe-Euro, amathuba awapheli. kodwa, lapho uvakashela kwelinye izwe, imithetho yomdlalo iyehluka kuye ngomuzi. Ukuphela kwento ehlala ifana ngamaphutha abavakashi abenza njalo ohambweni olulodwa. Esethu 10 amaphutha wokuhamba ukugwema eYurophu, kuzokugcina uphephile futhi kwenze uhambo lwakho luhluke kakhulu.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele iholide lakho eYurophu ngokukhetha kwakho ngesitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Amaphutha Okuhamba ayi-10 Okufanele Uwagwebe EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/travel-mistakes-avoid-europe/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, futhi ungashintsha i- / pl ibe / tr noma / de nezinye izilimi.
#traveleurope Europetips Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi TravelMistakes traveltips